नेपाली प्रगतिवादी उपन्यासको परम्परामा नौलो प्रस्तुति : हड्तालै–हड्ताल, जुलुसै–जुलुस | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: नेपाली प्रगतिवादी उपन्यासको परम्परामा नौलो प्रस्तुति : हड्तालै–हड्ताल, जुलुसै–जुलुस ★ होम सुवेदी★ प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७२
लेखक : होम सुवेदी विधा/श्रेणी : यस भेटका आकर्षणहरू रचना संख्या : 18 प्रकाशन मिति : शुक्रबार, असार १८, २०७२ होम सुवेदीका अरु रचनाहरु सरोज ओली उमेरमा झन्डै–झन्डै मेरा पिता सरहको हुनुहुन्छ । उहाँले यो कृति जहिले लेख्नुभयो त्यो बेला म भर्खर अध्ययनका लागि कालेबुङ जाँदै थिएँ । मैले अक्षरारम्भ गर्दाको बेला र साँच्चै भनौं भने मेरै उमेरजतिको पुरानो र उहाँले घरमै थन्क्याउनुभएको एउटा उपन्यास आज मेरा हातबाट टाइप हुँदैछ यसै कारण शायद उपन्यासकार मबाट भूमिका पनि लेखिमाग्दैहुनुहुन्छ ।
जसका बारेमा भूमिका लेख्न गङ्गा दाइ (गङ्गा उपे्रती) लाई समेत सङ्कोच लागेको थियो (गङ्गाप्रसाद उप्रेती, भूमिका, ‘स्टेथिस सागरदेखि हिमालसम्म’– पृ.क) भने त्यस्तो साधकका साधनामा भूमिकै लेख्ने हैसियत कसरी र कहिलेदेखि ममा गङ्गा सरभन्दा माथिल्लो हैसियत आयो ? म आफैं घोत्लिने स्थितिमा पुग्दैछु तर पनि भनेपछि हारिहाल्ने बानी नभएकाले जे त पर्ला भन्ने अठोट गरेर अब म कलमलाई पर सारेर कि–बोर्डमा औंला चलाउन थाल्दैछु ।
भूमिकै लेख्ने भएपछि अब म सरोज ओलीलाई औपचारिक भाषाको सीमामा राख्तिनँ । ओलीलाई म तृतीय पुरुषको एक वचनको सामन्य आदरको भाषालाई समातेर अघि बढ्छु ।
थालनी पूर्वको प्रसङ्ग:
आज आएर सरोज ओली (१९९८, होडा, आठराई) नेपाली साहित्यकारका रूपमा झापामा रहेबसे पनि राष्ट्रभरि नै विशेष गरी प्रगतिशील साहित्यकारको फाँटमा चर्चित प्रतिभाको हिसाबमा चिनिन्छन् । उनका आफ्नै फुपाजु धातृकाप्रसाद थपलिया (यसै उपन्यासका एक पात्रसमेत) का प्रेरणाबाट (कमल गुरागाईं ः सरोज ओलीका कथा पर्घेल्दा, ‘स्टेथिस सागरदेखि हिमालसम्म’ पृ.छ) यस कित्तामा आएको र लागिरहेको कुरा थाहा पाइन्छ । बिराटनगरको विद्यार्थीकालमा अध्ययन गर्दागर्दै यस कित्तामा पसेका ओलीको प्रकाशनको यात्रा भने अलिक अबेला भएपछि मात्र हुन थालेको बुझिन्छ, उज्यालो भएर पनि निकै बेरपछि मात्र घाम झुल्केजसरी । ढिलो गरेर यस मौजामा सरोज ओली कविका रूपमा (‘विद्रोह र मुक्ति’ कवितासङ्ग्रह, २०४८) बाट प्रकट भएका छन् । लेखेकै बेला सामग्रीको प्रकाशन गर्न सक्ने ख्याम्ता नेपालीहरूको आजसमेत छैन भने ऊ बेला सरोज ओलीमा त्यो ख्याम्ता हुनु सम्भव थिएन । अझ प्रगतिवादी विचारका सामग्रीहरू ऊ बेला छपाउनु भनेको कालकोठरीको चिसो खाएर उकाला लाग्नुसरह हुन्थ्यो । यसै उपन्यासको प्रकाशन गरेको भए त सरोज ओलीको भौतिक नामनिसानी पञ्चायतले राख्ने थिएन, किन पञ्चायतको मात्र कुरा गर्ने ? भर्खर हिजोअस्ति ६२ साल भन्दा केही अघि मात्र प्रकाशित गरेको भए उनको गति पनि डी.कौडिण्यको हुने निश्चित थियो । यसैले उनले जे लेखेका छन् मौकामा लेखेका छन् र जे प्रकाशित गरेका छन्, त्यो पनि मौका हेरेर मात्र गरेका छन् । यसो हुँदा उनका सामग्रीको लेखनसमय र प्रकाशनको समयमा तल–माथि परेको छ । चर्चा गर्न लागिएको यसै उपन्यासको पनि लेखन र प्रकाशनको कालमा झन्डै चार दशकको अन्तर छ । अन्तर पर्नुका पछिका दुई कारणमध्ये एक पञ्चायती राजनीतिको दबदबा हो र दोस्रो आर्थिक झमेला हो । आज आएर यो उपन्यास प्रकाशन गर्दाको अवस्थामा सरोज ओलीले दुवै झमेलाबाट मुक्ति पाए भन्ने अर्थ यस कथनबाट लाग्न सक्ला तर त्यसो पनि होइन । प्रकाशन गर्दा हुन सक्ने अपसब्बे भने आज आएर केही हलुकोजस्तो भएको छ भने आर्थिक स्थितिका अपसब्बेहरू भने आज पनि उत्तिकै छन् भन्ने ठान्दछु । मेरो यस भनाइबाट सरोज ओलीले यी दुवै कुरामा आज सहजता हात पारेछन् भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्ला, तर यसको अर्थ यसो पनि होइन, सरोज ओलीका लागि मात्र नभई नेपाली साहित्यकारका लागि आर्थिक फसादीले उत्तिकै थाप्लो ठड्याएको छ, यस समस्याले नेपाली साहित्यका साधकहरूलाई दिउसोमासै अँध्यारोमा पारेको छ । यस भनाइको निचोडमा सरोज ओली मात्र अपवाद छैनन् । अरू धेरै साहित्यसाधकहरूलाई पनि (केहीलाई छाडेर) भोलिको दिनमा पनि यस अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
यस्तै आर्थिक फसादीका माझबाट उनले यसबाहेकका र माथि चर्चा गरेको समेत जम्मा ५ कृतिहरू– (‘विद्रोह र मुक्ति’, (कवितासङ्ग्रह– २०४८), ‘मुटु छुने कथा’(कथासङ्ग्रह– २०५०), ‘सरोज ओलीका कविता’, (कविता सङ्ग्रह– २०५१), ‘तम्मर नदीका धुन’ (कवितासङ्ग्रह– २०५२) ‘स्टेथिस सागरदेखि हिमालसम्म’(कथासङ्ग्र्रह–२०६१) प्रकाशित गरिसकेका छन् । यहाँ चर्चा गरिएका कृतिहरू ओलीले आफ्नै खल्तीको जेथाबाट प्रकाशित गरेका हुन् । प्रगतिशील फाँटका कृतिहरू कसैले प्रकाशित गरिदेला भन्ने आश आज पनि गर्न सकिंदैन भने पञ्चायतको बेलामा यस्ता कृतिहरूलाई छपाएको भए प्रकाशक, लेखक, छाप्ने प्रेस, कम्पोज गर्ने कम्पोजिटर, मेसिनम्यान, बाइन्डर, किन्ने, बेच्ने र पढ्नेसम्मलाई पनि कालकोठरीको यात्रा गर्नु पर्ने स्थिति थियो । यसैले सरोज ओलीले आफ्ना सबै कृतिहरूको प्रकाशन आफ्नो र अन्य सबैको भौतिक शरीरको सुरक्षा हुने मौका हेरेर मात्र गरेका छन् । उनका कृतिहरू आफ्नो र परिवारको पेट काटेर, खाई–नखाई र लाई–नलाईकन भए पनि प्रकाशन गरिएका छन् ।
सरोज ओलीका कृतिहरूका प्रकृतिले नै ओलीलाई कविता र आख्यानमा कलम चलाउने साधकको रूपमा देखाउँछन् र यस कृतिले त यस भनाइलाई बल पु¥याउन झन् मद्दत गर्दछ । अब हामी मूल प्रसङ्सगतर्फ लागौं ।
‘हड्तालै–हड्ताल जुलुसै–जुलुल’ औपन्यासिक कृति हो । यो कृति लेखकका भनाइअनुसार झापा र मोरङका किसान आन्दोलनका र झोडासमस्याका विगत घटनाहरू यसमा समावेश भएका कारण पनि २०२७ सालभन्दा अघि नै लेखिएको सिद्ध गर्दछन् । लेखनका हिसाबले मात्र हेर्दा झापाको पहिलो वा दोस्रो उपन्यासमा यो उपन्यास पर्न सक्छ । नेपाली उपन्यासको फाँटमा बृहत् आकारका उपन्यासको ताँतीमा पर्न सक्ने यो उपन्यास प्रगतिशील कित्ताको भने उच्च तहको उपन्यास हुने कुरा पनि यसका विषयवस्तु,यसका घटनाविवरण र यसका इतिवृत्तहरूले सिद्ध गर्दछन् । मोहनबहादुर मल्लको ‘समयको हुरी’, हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको ‘स्वास्नीमान्छे’ र ‘एक चिहान’ र मुक्तिनाथ तिमल्सिनाको ‘को अछुत ?’ जस्ता कृतिलाई केही अर्थमा पुराना प्रगतिवादी र प्रगतिवादतर्फ उन्मुख उपन्यासका रूपमा लिने हो भने यसलाई यस कित्ताका उपन्यासमध्ये ती उपन्यासभन्दा एक गज माथिको उपन्यास भन्न सकिन्छ । अझै यसलाई त प्रगतिवादी मात्र भनेर पुग्ने देखिन्न । यसलाई त क्रान्तिकारी प्रगतिवादी उपन्यासको दर्जाभित्र दर्ता गर्नुपर्ने ठहर हुन्छ ।
सस्ता कलाकारहरूले आर्थिक दासता र पूँजीवादी संस्कारका कारणले गर्दा कलाको मर्मलाई अपवित्र र विरूप पारेका छन् भन्ने सोच पनि यसमा छ । निःस्वार्थी कलाकर्मीहरू अर्थमा बिक्री हुँदैनन् र उनीहरू आफू कलासाधनामा तपस्यारत हुन्छन् भन्ने आशय पनि यस उपन्यासका रनवीर बूढाबाट देखाइएको छ ।
यो उपन्यास जम्मा ७९ खण्डमा विभक्त छ । विशेष गरी तत्कालीन कोशी अञ्चलको पहाडी भाग आठराई र मोरङ जिल्लाको बिराटनगर, मेची अञ्चल झापाको तराई भाग र भारतको दार्जेलिङसमेत यस उपन्यासका चित्रित परिवेश हुन् । धेरथोर भए पनि काठमाडौं, इलाम, पाँचथर र सुनसरीको धरान जस्ता केही स्थलहरू पनि यसमा देखिन्छन् । यसैले यसलाई आञ्चलिक उपन्यासको कित्तामा राखेर मूल्याङ्कनसमेत गर्न सकिन्छ । झापा मोरङको किसान आन्दोनबाट उपन्यासको वस्तुचयन गरिएको छ । खास गरी यो उपन्यास झापाको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनलाई केन्द्रित बनाई लेखिएको छ । तर मोरङका मिलहरूको हडताल, काठमाडौंमा गरिएको राँके जुलुस, झापाको भद्रपुर र चन्द्रगढीको जुलुस आदिलाई केन्द्रित गरिएको हुँदा उपन्यासको नाम ‘हड्तालै हड्ताल र जुलुसै–जुलुस’ रहनु उचित छ । नारा, विद्रोह, हड्ताल, जुलुस र त्यस पक्षको तयारीका योजनाहरू नै उपन्यासका प्रमुख घटनाहरू र कार्यहरू हुन् । समाजमा शोषण र अन्यायका विरुद्ध एवम् नयाँ युग र नयाँ परिवर्तनका लागि गरीब र निमुखाले सङ्गठित भएर आफ्नो शक्तिप्रदर्शन गर्न हड्ताल, जुलुर, नारा आदि भन्दाबाहेकको सजिलो अर्काे बाटो छैन भन्ने निचोड उपन्यासको छ ।
यसबाहेक यसै उपन्यासमा अनेकौं पक्षहरू छन् । कला र विशेष गरी काष्ठ कलाकारिताको बारेमा गम्भीर मनन–चिन्तन छ । उपन्यासकारको कलासाहित्य र नयाँ सिर्जनाका बारेमा ठूलो सोच रहेको छ । सहज कला स्वतःस्पूmर्त रूपमा प्रकट हुने कुरा हो भन्ने निचोड उपन्यासकारले दिएका छन् । गरीबहरू सङ्गठित भएर सामन्तीप्रथाका विरुद्धमा खनिएको देखाइन्छ । आफ्नो मुक्तिका लागि किसानहरू सुसङ्गठित भएको देखाइन्छ । सामन्तहरूको अन्त्य र उनीहरूको अन्यायका विरुद्ध खनिन, मर्न र मार्नसमेत तयार पारेर त्यस्ता तयार भएका समूहलाई एकबद्ध र अटल पारेर उभ्याइन्छ । यस्ताहरूको विरुद्धमा योजनाबद्ध रूपमा क्रान्तिको योजना तय गरेर त्यस योजनालाई कार्यान्वयन नै गरिन्छ । अन्यायीलाई मारिन्छ, स्वेच्छाचारी र पापीलाई ध्वस्त पारिन्छ । अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा तयार रहन र क्रान्तिलाई सफल पार्नका लागि सर्वसाधारण मज्दूर, किसान र शोषितहरूलाई जागरणको पाठ पढाइन्छ र सुसङ्गठित गरिन्छ । त्यस्ता योजनाकारहरूका क्रान्तिपाठहरू र योजनाहरू उपन्यासभित्र बडो चलाखी र चतूरताका साथ तय भएका देखिन्छन् र तिनलाई बडो चलाखीका साथ कार्यक्षेत्रमा सफलतापूर्वक लागू गरिन्छ । क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिक्षेत्रमा वा युद्धक्षेत्रमा आफ्ना योजनाहरू कसरी लागू गर्न सक्छन् भन्ने कुराको बडो स्वाभाविक ढाँचामा उपन्यासले देखाएको छ । असल क्रान्तिवीर हुनु हो भने चेतनामा, सोचाइमा, दैनिक जीवनमा र सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनका लागि कुनै लामो समय लाग्दैन भन्ने कुरा पनि उपन्यासले देखाएको छ । किसानहरूलाई आफूमाथि हुने शोषणका विरुद्धमा एकबद्ध गराइनु, सामन्तको प्रथा र त्यसै व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूबाट उन्मुक्तिका लागि किसान, मज्दूर र विद्यार्थीहरू एकताबद्ध भएको देखाइएकोले यो उपन्यास विशुद्ध प्रगतिवादी हो । प्रगतिवादमा निराशावादको गुन्जायस हुन सक्तैन । पलायनवाद प्रगतिवादको विपरीतको ध्रुव हो । जीवन भोगका लागि नभई बलिदानका लागि हो । यसमा विचार वा आस्थाले सर्वाेपरि मान्यता पाएको हुन्छ । जैविक गतिविधिलाई अनुशासनका घेरामा राखेर उपयोग गरिन्छ । यस्ता कुराहरू यस उपन्यासमा पनि अनुशासन र संयमपूर्वक पालन गरी चित्रण गरिएका छन् । जीवनभरि गरिएका योजनाहरूलाई निस्सारताको खाडीमा लगेर एक चिहान बनाएको हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको ‘एकचिहान’ जस्तो उपन्यास यो होइन । यसमा देशभक्तिका लागि तयार भएका योजनाहरू लागू भएका छन् । समतामूलक समाजको लागि गरिएको यज्ञका बाधकहरूलाई मार्न यस उपन्यासमा कुनै डर राखिएको छैन । त्यस मृत्युबाट कसैले पछुताउ गरेको छैन । सामन्त र किसानविरोधी शोषकहरूको मृत्युका लागि आबालवृद्ध बनितालाई तयार गराइएको छ । यी सबै गतिविधिलाई हेर्दा यो उपन्यासको क्रान्ति नेपालको पछिल्लो जनयुद्धको क्रान्तिको शैलीकै देखिन्छ । किसान, विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रका मज्दूरहरूलाई सुसङ्गठित गराइएको र अन्याय र अत्याचामाथि धुइरो भएर खनिएको देखाइएकोले पनि यो कुरा भन्न सजिलो छ । उपन्यासको अन्त्यमा उत्तरवर्ती क्रान्तिका लागि ऐक्यबद्ध भएर योद्धाहरू धावातिर लाग्दछन् । फूलमाला र अबीर लगाइदिएर उत्तरवर्ती युद्धका लागि योद्धाहरूको टुकडीलाई अनाथालयको भव्य परिसरबाट बिदाइ गरिएको छ । यसरी उपन्यासलाई आदर्शताको पाप्तिका लागि अघि बढेको अवस्थामा टुङ्ग्याइएको हुँदा आदर्शोन्मुख क्रान्तिकारी उपन्यासको रूपमा यसलाई मान्नुपर्दछ ।
यो उपन्यासलाई युद्ध वा क्रान्तिलाई सुव्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने एक योजना वा प्लानको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै पनि योजनालाई कार्यक्षेत्रमा उतार्न योजनाकारका रूपमा रहेको नेता सिपालु, विवेकी, दूरदर्शी र गतिशील भए मात्र योजनाा सफल र सम्भव हुन्छ । साथै योजनाकारका सही योजनालाई कार्यक्षेत्रमा लागू गर्न दक्ष प्राविधिकहरूको पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ । यस उपन्यासका पात्रहरूमा हरि र अमर सुब्बा जस्ता पात्रहरू योजनाकार र अरू पात्रहरू तिनीहरूले तयार गरेका योजनाकारको योजनालाई लागू गर्न नियुक्त भएका सफल कालिगढ वा योद्धाजस्ता लाग्दछन् । रनवीर सुब्बा बूढालाई काष्ठकलाका महान् शिल्पी र त्यस कलाको सैद्धान्तिक पक्षका पनि निकै नै पोख्त पात्रको रूपमा उभ्याइएको छ । कलाका बारेमा रनवीरले जति जानेका छन् त्यो कुरा उनको शैक्षिक स्तर भन्दा केही बढी भएको अनुभव हुन्छ । यी सबै पात्रहरूको भूमिका कोरा कालिगढको जस्तो मात्र पनि देखिँदैन र छैन पनि । उपन्यासका आकारका हिसाबमा प्रमुख पात्रहरूको सङ्ख्या अधिक छैन । हरिप्र्रसाद अर्थात् हरि दाइ यस उपन्यासका प्रमुख पात्र हुन् । उपन्यासका घटनाहरू समाजमा परिवर्तन र सामन्ती व्यवस्थाको समाप्ति र लोककल्याणकारी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि अघि बढेको देखिन्छ । राष्ट्रबाटै सामन्ती संस्कार र सामन्तहरूलाई समेत उखेल्ने योजना उपन्यासका पात्रहरूका नायकको योजनामा छन् । भूमिहीनहरूका लागि भूमि, भोकाका लागि भोजन, अनाथका लागि सम्मानपूर्ण जीवन निर्बाहको मेसो, अपठितहरूका लागि राष्ट्रबाटै शिक्षाको अवसर र अर्काेको मुलुकमा गुलामी गरेर अत्यन्त दयनीय जीवन बिताउन विवशहरूका लागि स्वदेशमै सम्मानपूर्ण प्रतिस्थापन, कलाकार रङ्गकर्मीहरूको सृजनाको सम्मान र सुरक्षा आदि कुराहरू यस उपन्यासका मूल योजनाहरू हुन् । यिनै योजनालाई सफल पार्न उपन्यासका मूल पात्रले अन्य पात्रहरूलाई एकगठ पारेका छन् । उपन्यास यसै योजनाको योजनाबद्ध कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको छ । पात्रहरूको भूमिका तलको रेखाका घटकहरूले अझ स्पष्ट पार्न सक्छन्
कतिपय प्रगतिवादी उपन्यासहरूमा योजनाबद्ध रूपमा योजना तर्जुमा गरिएको पाइए पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । तर यस उपन्यासमा भने युद्धका कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा तय गरिनु र कार्यक्षेत्रमा समेत उपयोग गरिनुमा यस उपन्यासको सबलता देखिन्छ । कतिपय स्थानमा अलिक बढी संयम गरिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने विचार यस सन्दर्भमा राख्नु पनि धेरै अर्घेल्याइँ गरिएको नमानिएला । उपन्यासकारका आफ्ना विचारहरूलाई पात्रका माध्यमबाट बोल्न दिएको भए पनि भारतीयहरूलाई केही स्थानमा ‘धोती’ शब्दको प्रयोगमा र सिलगढीबाट रेलमा दार्जेलिङको यात्रामा लाहुरेले बोलेको कथनमा लेखकले स्थिति र गम्भीरता झल्काउन नसकेझैं देखिन्छ । सालाखालामा उपन्यासमा दुर्बल पक्ष भन्दा सबल पक्षकै प्रबलता छ ।
उपन्यासको सारपक्ष आदर्शवादी छ भन्नेमा द्विविधा हुनु पर्दैन । पहिलो पक्ष यस उपन्यासले राष्ट्रवादलाई ज्वलन्त रूपमा उठाएको छ । अन्यायको विरुद्ध उभिने अरू कोही आउँदैन आफैं सजग भएर उठ्नु पर्छ भन्ने कुरा अर्काे आदर्श हो । अनाथ, अपाङ्ग, हेलित र तिरस्कृतहरूलाई शिक्षा दिएर (अनाथ आश्रमबाट) सामन्ती र पूँजीवादी संस्कार समाप्त पार्न निम्नवर्गमा शिक्षा र जागृतिको खाँचो औंल्याएको छ । सामाजिक अव्यवस्थाका विरुद्धमा सजग प्रहरीका रूपमा जनस्तरका मान्छेहरू नै लाग्नुपर्ने सङ्केत छ । कला र संस्कृतिको मूल्यको सही पहिचान गर्नुपर्ने कुरा पनि यसमा छ । सस्ता कलाकारहरूले आर्थिक दासता र पूँजीवादी संस्कारका कारणले गर्दा कलाको मर्मलाई अपवित्र र विरूप पारेका छन् भन्ने सोच पनि यसमा छ । निःस्वार्थी कलाकर्मीहरू अर्थमा बिक्री हुँदैनन् र उनीहरू आफू कलासाधनामा तपस्यारत हुन्छन् भन्ने आशय पनि यस उपन्यासका रनवीर बूढाबाट देखाइएको छ । बिकाउ कलाकारहरूबाट सही कला प्रकट हुनै नसक्ने निचोड पनि यसमा छ । यो उत्तरवर्ती कालका लागि दृष्टान्त पनि हो ।
आफ्नो प्रगतिका लागि र आफूमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध जनताहरू जुध्नु र जुट्नुलाई प्रगतिशीलताको नमूनाका रूपमा लिने हो भने प्रस्तुत उपन्यास प्रगतिशील आदर्शवादमा आधारित छ । देशविकासको यज्ञमा सामाजिक परिवर्तनका लागि रगतमा रगत मिलाएर तन–मन–वचन र कर्ममा एकजुट भएर उपन्यासको अन्तमा सम्पूर्ण पात्रहरूलाई क्रियाशील गराइएको छ । यसबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौं, उपन्यासकार सरोज ओली प्रस्तुत उपन्यासबाट संघर्षको शङ्खघोष गर्दै अन्याय, अत्याचार र व्यभिचारका विरुद्धमा खनिएका छन्, एकलक्ष्योन्मुख छन्, समाजमा समानताको परिवर्तनकामी यज्ञमा सामूहिक बलिदान गर्न अघि बढेका पात्रहरूको बन्दोबस्त गरेका छन् । उपन्यासमा यो क्रिया देखिएको हुँदा यसलाई प्रगतीशील आदर्शवादी उपन्यासको कोटीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
अत्याचारी, व्यभिचारी र शोषकहरूको नस्लच्छेदन नै गराइएको देखिंदा पाठकहरूलाई अलिक अप्ठेरो लाग्न सक्छ । तर युद्धकालमा शत्रुहरूको बिउ नास्ने अभियान नै बोकेको प्रस्तुत उपन्यासमा यो विध्वंशलाई अर्घेलो नमान्नु नै बेस होला । हुनत शत्रुलाई मृत्यु भन्दा अर्काे उपायबाट पनि कायल पार्न त सकिंदो हो । जिउँदा मान्छेहरूलाई सोझै आगाको धुनीमा हालेर नामोनिसान पारेको देखाइएकोमा भने अलिक अप्ठेरो लाग्न सक्छ । तर हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्ट र पापीहरूलाई यसरी मारेको देखाइँदा यो मार्ने योजनामा पनि चित्त बुझाउनै पर्नेजस्तो लाग्छ । अत्यन्तै निर्मल चरित्र भएकी आफ्नी छोरीमाथि बलात्कार गर्ने कुत्सित इच्छा बोकेको दुर्गाको बाबुलाई भने यो दण्ड दिएको देखिंदैन । एकातिर यस्ता कृतघ्नहरू समाजमा छन् भने अर्कातिर ढिकिया थारु र डाक्टर विजयजस्ता महान् जनसेवी र महान् दाताहरू पनि समाजमा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि देखिन्छ ।
अनेकौं उखान र आदर्शवचनहरूले सजिएको यो उपन्यासलाई प्रगतिशीलताको एक अपूर्व नमूनाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सरोज ओलीको यो उपन्यास ओलीको दृष्टिमा–‘इतिहासमा राजा–महाराजाहरूको मात्र बखान लेखिनु त स्वार्थता हो, उही अन्ध परम्परालाई जिउँदो राख्नु हो’ (पृष्ठ ३२१) भन्ने मान्यतामा आधारित छ । कथावस्तुको मूल पात्र हरि नै ओलीको आदर्श र मुखपात्र हो । उसलाई अपूर्व साहसी र महान् सेनानायकका रूपमा पनि यसमा उभ्याएको देखिन्छ । कथाका मूल पात्र हरिको कथन मननीय छ– उसको भनाइ र गराइमा कुनै अन्तर देखिंदैन । अन्ध, अपाङ्ग, अनाथ र असहायहरूका लागि उसले दिलोज्यानले काम गरेर लक्ष्य सिद्ध गरेको छ र बाँकी रहेका कामका लागि क्रान्तिक्षेत्रमा होमिएको देखिन्छ । यसबाट समाजको परिवर्तनका लागि क्रान्ति अपरिहार्य रहेको तथ्य ओलीले अघिसारेको बुझिन्छ । उसका मुखबाट धावामा लाग्नुअघि आफ्ना भाइ मनुलाई अर्जाप्तै ओलीले भनाएका छन्–“म आजै प्रष्टिन चाहन्छु भाइ– मलाई त स्वर्ग ताक्नेको होइन जमीन खन्नेको सङ्गतमा पर्न मन छ ।” (पृष्ठ ३५५)
कला, साहित्य, राजनीति, अर्थनीति, समाज, किसानी समस्या र मानवजीवनका बारेमा हरि पात्रका माध्यमबाट सरोज ओलीले गहिरो दर्शन पनि पेस्न भुलेका छैनन् । क्रन्तिकारी र अदम्य साहस भएको कुसल नेताका रूपमा चित्रण भएको मूल पात्र हरिप्रससादको मूल दर्शन उपन्यासमा सर्वत्र छ, निःस्वार्थी उच्च चरित्रको पात्रमा हुने आदर्श उसमा छ । अन्यायमा झुक्नु भनेको जिउँदै मर्नु जत्तिकै मान्ने हरि पात्र नै उपन्यासको केन्द्रीय पात्र हो । यसै पात्रका माध्यमबाट उपन्यासकारको कथन छ–“आपूmलाई मन नपरी–नपरीकन पनि हामीले मन प¥यो भन्ने गरेका छांै । यसरी हामीले भन्नु वा गर्नु हँुदैन । साँचो र झुटो छुट्याउन सक्ने क्षमता भएर पनि हामी त्यसो गर्दैनांै । म भन्छु– हामी नडराऊँ । हो, साँच्चै हामी कहिल्यै पनि नडराऊँ । साँचो कुरो गर्न बाबु ! डाडाँबाट चिच्याऊ, सही कुरामा मार्लान् भन्ने तिमी नसोच, मर्छु भन्ने तिमी नठान । अनि तिमीले साँचो कुरो एकपटक भन्न वा गर्न भुल्यौ भने जीवनभर आपूmलाई भुल्नेछौ । मान्छेले त सिङ्गो जीवनको पो चित्रण गर्नुपर्छ त !” (पृष्ठ ३८७) ।
उपन्यासभित्र जीवनजगत्का अनेकौं पक्षहरूको पौल छ । बाँकी कुराहरू पाठकहरूले स्वयं पढेर अनुभव गर्नेछन् । अहिलेलाई यत्तिमै यो कथनलाई यहीं सकूँ ।
‘हड्तालै हड्ताल जुलुसै जुलुस, २०६६
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : गर्व छ मलाई…. सुधा राना शुभकामना प्रेमिल मनले लेखेका वियोगान्त गीतहरु – मायाको फूल भाउजु सेल्फी वार्ड जापानमा विकल्पको खोजी तरूल खन्दैछु आमा रामलाल जोशीको ऐनाः सुदूरको आवाज नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com